Hisy ny tanora hisolo tena an’i Madagasikara any ka hamelabelatra ny asa vita nandritra ny 25 taona. Ankoatr’izay dia hisy ihany koa ny fanatanterahana fanadihadiana any mahakaika ny fampandrosoana. Hojerena amin’izany ny olan’ny tanora eo amin’ny lafiny fananahana sy ny vohoka tsy niriana na aloha loatra izay miteraka tsy fampandrosoana eto Madagasikara. Mahasahana ny lafiny rehetra momba ny fitomboan’ny mponina ihany koa ity ICPD ity ka anisan’izany ny fifindra-monina, ny fahanterana ,ny fanovana ny rafitr’asa ary indrindra ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatr’ireo tanora ireo moa dia hiainga ho any Kenya ihany koa ny solotenan’ny governemanta, ny fikambanana ara-pahasalamana.